Muqdisho(keydmedia) Inta xogtooda la helay waxaa ku geeriyooday 5 ruux dagaal xalay ilaa shalay galinkii danbe dhex marayay Ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda oo wada jira iyo xoogaga dowladda ka soo horjeeda .
Sidoo kale dagaaladan ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 ruux oo rayid ah kuwaa oo ku sugnaa degmooyinka Shibis, Boondheere, Yaaqshiid, Hodan iyo H.wadaag, waxaana dadka dhaawacmay loola cararay isbitaalada Magaalada Muqdisho.
Gumaca rasaasta ayaa wali laga sii maqlayaa deegaanada qaar waxaana sidoo kale meelaha qaar laga dareemayaa dhaq dhaqaaq ciidan oo ay dhinacyada sameynayaan.
Dagaaladan ayaa ku soo beegmaya xili saacada qura ay ka harsantahay waqti ay dadku si weyn u hadal hayeen in dowladda ay isbadal ku dhalin karto iyadoona ay muuqato in aanu jirin horumar dagaalka ay ka gaarayaan dhinacyada.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho waxaa si weyn loo hadal hayay in ciidamada dowladda ka hor sanadka 2011 in ay isbadal balaaran ka sameyn doonaan dagaalada ka socda magaalada Muqdisho.